मेरो जीवन बाहिरबाट अरूले देखेको जस्तो सुखी छैन- साहित्यकार गणेश रसिक-Brtnepal.com
Loading... मेरो जीवन बाहिरबाट अरूले देखेको जस्तो सुखी छैन- साहित्यकार गणेश रसिक
विआरटि नेपाल सम्बाददाता, Published on August 11, 2016 at 3:04 pm
एउटा नमिठो यर्थाथ । गणेश रसिकको शब्दमा संगीतकार प्रवीण गुरुङले सङ्गीत भर्दैथिए । सङ्गीत पुरा नहुँदै प्रवीण गुरुङको दुखद निधन भयो । प्रवीण गुरुङले सारा संगीतप्रेमी मनहरुलाई झैँ गणेश रसिकका शब्दलाई पनि टुहुरो बनाएर गए । जुन गीत तयार गरेर उनी पोखरामा बस्ने आफ्नी बुढी आमालाई सुनाउन चाहन्थे ।
प्रवीण गुरुङले छोडेर गएको शब्दमा गणेश रसिकका छोराले सङ्गीत सुरु गरे । सङ्गीत भरेर सक्दा नसक्दै उनको पनि यस्तै अप्रत्यासीत निधन भयो । के थियो यो गीतमा र यसले दुई जना संगीतकार गुमायो । तिनै साहित्यकार, संगीतकार तथा गायक गणेश रसिकसंग सुषमा देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित
२००४ साल आश्विन महिनामा भोजपुर जिल्लाको छिनामखु ५ मा जन्मिएँ म । एकमाना खानपुग्ने परिवार थियो हाम्रो । हजुरबुबा बडाहाकिम हुनुहुन्थ्यो । मेरो बुवाको शिक्षा दार्जिलिङमा भएको हो । २००७ साल अगाडी राणा एकतन्त्रिए सालनकाल,जनताका छोराछोरीले पढ्न नपाईने अवस्था । त्यसैले मेरो परिवारका सबै सदस्य दार्जिलिङ र बनारसतिर नै पढ्नु भयो । घरमा चेतना थियो, पढ्नु पर्छ भन्ने । त्यसैले मैले पढ्न पाएँ । पहिले गाउँमा नै पढें, पछि भोजपुर सदरमुकाम आएर पढेँ ।
म ३/४ वर्षको हुँदा आमा खस्नुभयो । बच्चैदेखि अन्तरमुखी स्वभावको थिएँ । साहित्य र सङ्गीतमा रुचि राख्ने त्यसै कारण भएछु क्यारे । बुवा दार्जिलीेङमा पढ्नु भएकाले धरणीधर कोइरला, पारसमणी प्रधान, सुर्यबिक्रम ज्ञवाली जस्ता साहित्यकारको सङ्गतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला दार्जिलिङबाट निस्कने सबै पत्रपत्रिका र साहित्यिक पुस्तक घरमा ल्याउनु हुन्थ्यो । म बच्चैबाट ती पत्रपत्रिका र पुस्तकहरू पढ्थें । त्यसको प्रभाव पनि प¥यो ।
अर्को कुरा हामीलाई पढाउने शिक्षक शिक्षिका दार्जिलिङको हुनुहुुन्थ्यो । उहाँहरूको सङ्गीतमा रुचि थियो । स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो । हामीले नाच्नुु गाउनु पर्ने र त्यही कार्यक्रम बाट पैसा उठाएर उहाँहरूको तलब ख्वाउनु पर्ने । त्यो मेरो संगीतयात्राको सुरुवात थियो । यसरी बढेको साहित्य र सङ्गीतप्रतिको मोहलाई आजका दिन सम्म छोड्न सकिएन ।
२०२२ सालमा काठमाडौ आएँ । मन्जुल, रामेश, रायनसँग यहीँ भेट भयो । हामीले राल्फा समूह गठन गरेउँ । बिमल राल्फा, निरन्जन राल्फा, निनु राल्फा, हामी धेरै साथीहरू आवद्ध थिएउँ राल्फामा । पारिजात दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी समुहगत गीत गाउँथेउँ ।
पछि मैले राल्फा छोडेँ । सायद मेरो आफ्नै कमजोरी थियो राल्फा छोड्नुमा । त्यसपछि हिरण्य भोजपुरे, उर्मीला श्रेष्ठ, तिर्थ श्रेष्ठ, निर्मल ाश्रेष्ठ, नवीन किशोर राई आदि मिलेर हामीले लेकाली समूह गठन गरेउँ ।
२०२३ सालबाटै मैले रेडियो नेपालबाट गीतहरू गाउन सुरु गरिसकेको थिएँ । “उँभोलाई हेरुँ त्यो तारे लेक उँधोलाई भिरह, कि लाग्छ मलाई हजुरको मायाकि चल्छ बिरह” । पहिलो पटक रेकर्ड भएको मेरो गीत यही थियो । त्यो बेला गाईयो, त्यसको रेकर्ड पनि रेडियो नेपालमा छ कि छैन, थाहा छैन । त्यसपछि “य है आज भेडाबाख्रा कता लाने”बोलको गीत रेकर्ड गराएँ । सबैले मन पराउनु भयो ।
त्यतीबेला रेडियो नेपाल मात्र थियो गीत रेकर्ड गराउने माध्यम । हामी लाईभ गाउँथेउँ । रेकर्ड गर्न ६ महिना भन्दा बढी समय पनि पालो कुर्नु पर्थो । गाउँदै जाँदा बाध्यवाद्यक या गायक, गायिकाले एक ठाउँमा बिगा¥यो भने फेरि सुरुबाटै गाउनु पर्थो । त्यो बेला गाएका गीत अझै पनि कण्ठ छ । किनकि शब्द–शब्दमा मेहनत गरिन्थ्यो । आजभोली झैँ टुक्रा–टुक्रा गाउन पाइने जमाना थिएन । धित मर्ने गरी गाइन्थ्यो । अहिले त धित नै मर्दैन गाउँदा । अल्छीपन बढेको जस्तो लाग्छ प्रविधिको विकाश सँगै । बिग्रीएपनि के भयो र ? फेरि गाउन पाइन्छ । यो सोचेर गाउनु र बिगार्नै हुँदैन भनेर गाउनुमा फरक छ ।
२०२६ सालमा कलाकारकको रूपमा राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाएँ । तलब १५० रुपैयाँ थियो । २० रुपैयाँ कोठा भाडा तिर्थें । २०÷३० रुपैयाँले महिनाभरी खाना खान पाईन्थ्यो । रेडियो नेपालमा गीत गाएको पारिश्रमिक १० रुपैयाँ पाउथेँ । आजको समयमा त्यति पैसा के हो र? समय धेरै बदलिएछ ।
गाउने क्रममा बिर्षनै नसक्ने कति क्षणहरु पनि छन् । दार्जिलिङमा एउटा कर्यक्रममा गाउन गएको थिएँ ।
“लडि नहार्ने नेपाली छाती कर्दैले चिरेछ,
यो गीत गाएँ । कार्यक्रम सकियो । छेउमा बसिरहेको थिएँ । एक जना ठुलो जिउडालको, अजंगको मान्छेले मेरो पाखुरा च्याप्प समाएर अलि हप्काएझैं गरी सोध्नुभयो– “अघि गीत गाउने मान्छे तिमी नै हो” ? म त पातलो थिएँ त्यति बेला । दार्जिलिङतिर तिमी भन्ने शब्द ज्यादा प्रयोग हुन्छ, तपाँई भन्दा । यो एउटा आत्मीयता पनि हो ।
मैले नै लेखेको हुँ भनेँ । उहाँले भन्नु भयो–“विश्व थर्काउने नेपाली वीर,तोपले नछेड्ने, गोलीले नछेड्ने नेपालीको छाती तिमीले कसरी जाबो कर्दले चिरेछ भनेउ ? ल मलाई यसको जबाफ दिनुप¥यो” । म के भनुँ–भनुँ भएँ । यो गीत त मैले नेपालको सन्र्दभमा लेखेको थिएँ । उहाँलाई जवाफ त दिनै प¥यो । भनेँ–“हेर्नुस हामीले संसार जितेर के गर्नु । अझै पनि हाम्रो आमाको भाषाले मान्यता पाउन सकेको छैन । यहाँ दार्जिलिङमा हामी यतिका नेपाली छौँ । लडिरहेका छौँ आफ्नो भाषाको अस्तित्वको लागि । तर हामीलाई दुख दिइरहेका छन्, कर्दले छाती रेटेर । जुन छातीमा हाम्रो भाषा र आमाको अस्तित्व छ” । यति भनेपछि उहाँले स्याबास भनेर,मलाई बोकेर पुरै स्टेज घुमाउनु भयो ।यो २०२७ सालको कुरा हो ।
अर्को एउटा घटना सम्झन्छु दार्जिलिङकै । त्यहाँका स्थापित संगीतकार र गायक गायीकाहरु आएको एउटा होटलमा आयोजित कार्यक्रममा हामीलाई नेपालबाट आएको कलाकार भनेर बोलाईयो । होटलमा गएउँ । पार्टी भयो । सबैले नेपालबााट आएको कलाकारको गीत सुन्नु पर्छ भन्नुभयो । हामीले सिधै भन्दीएउँ–हामी यसरी भात खाएर होटल सोटलमा गीत गाउँदैनौं । यति भनेर हामी बाहिर आएँउ । हाम्रो मान्यता थियो, मानोरन्जनको लागि मात्र गीत नगाउने । तर अहिले लाग्छ, हामीले त्यो बेला गाईदिनु पर्थो । उहाँहरूले नेपाली भनेर गरेको माया र आफ्नोपनलाई हामीले नबुझेका रहेछौँ । १÷२ वटा गीत गाईदिएको भए के जान्थ्यो र ?
जीवनमा नसोचेका सुख पनि पाएँ । तर मेरो जीवन बाहिरबाट अरूले देखेको जस्तो सुखी छैन । दुख धेरै छन् म सँग । यति लामो जीवन दुखै दुखमा बित्यो मेरो । आमा सानैमा खस्नुभयो । बुवाले अर्को विवाह गर्नु भयो । १६\_१७ वर्षको उमेरमा घर छोडेँ । ती दुखका दिन सम्झन्छु अझै । बुवा पनि खस्नुभयो । भाइ बहिनी हुर्काएँ । पछि कान्छो भाइले आत्महत्या ग¥यो । माहिलो भाइ माओवादी द्वन्दमा मारियो । साहिंलो भाइ एक्सीडेन्टमा बित्यो । छोरा थियो । छोरा पनि ४\_ ५ वर्ष पहिले बित्यो । धेरै दुख भोगेको भएर होला दुखै साथी जस्तो लाग्छ । हुनत एक दिन म पनि जानु पर्छ । तर मानसिक पिडा भई रहँदो रहेछ । कैलेकाँहि साह्रै एक्लो महसुस हुन्छ आफूलाई । छोरी बेलायत छ । उ पट्टी एउटा नाति छ । अहिले हामी ४ जनाको परिवार छौँ । म, श्रीमती, बुहारी र ८÷९ वर्षकी नातीनी । परिवार सँग छु, यही सुख हो यतिबेला ।
सायद आमाको अभाव नखड्को भए लेख्थिन होला म । संवेदशील, एक्लो र अन्तरमुखि हुँदा नै सृजन ागर्न सकें । अभावलाई व्यक्त गर्ने माध्यम साहित्य र सङ्गीत भई दियो । यसैलाई आधार मानेर बाचेको छु । सङ्गीत नभएको भए म धेरै पहिलेनै आत्महत्या गरिसक्थें । मेरो जीवनमा यस्ता क्षणहरु पनि आए जो मैले सहन सक्के खालका थिएनन् । मैले तिनै दुखलाई सङ्गीतमा भरें । भावनालाई सृजनामा मिसाएर आफूलाई समालेको छु ।
म चाईना, रसा, बेलायत, हङकङ, सिङ्गापुर, क्यानडा, जापान आदि देशहरू पुगेँ । विदेशमा कार्यक्रम गर्दा यस्तो महसुस हुन्छ, मैले लेखेर, गाएर राम्रै गरेछु । विदेशमा बस्ने नेपालीले देखाउने आत्मीयता र माटोको मायालाई मेरा शब्दहरूले सम्मान गरेर नपुग्ला । उहाँहरू १३/१४ घण्टा काम गर्नुहुन्छ । तै पनि नेपाली कलाकारको कार्यक्रम भनेपछि थकाइ, भोक नभनि समय निकालेर आउनुहुन्छ । आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुहुन्छ । मैले धेरै प्रोत्साहन पाएको छु विदेशमा बस्ने नेपालीको यो व्यवहारबाट ।
सङ्गीत क्षेत्रको विकाशको लागि सरकारलाई दबाब दिने काम हामीहरूको हो । हामीमा एकताको कमी देख्छु । आपसी आत्मीयता बोकेर सङ्गीत क्षेत्रको विकाश गर्न खोज्ने हो भने पक्कै पनि सरकारले हेर्ने छ । आफ्नो–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सके मात्र पनि साङ्गीतिक क्षेत्र बलियो हुनेछ । जस्तो कि म एकेडेमीमा छु । मेरो पनि दायित्व हो, कुनै दल वा बिचारका मान्छे होइन असली स्रष्टालाई अगाडी बढाउनु ।
अहिले सङ्गीत बजार महङ्गो भयो । पैसा नहुनेले प्रतिभा र खुवि हुँदापनि ठाउँ पाउँदैनन । एउटा एल्वम ४० लाखको पनि हुन्छरे । सुन्दा पनि डर लाग्छ । हाम्रो त घरबारी, जग्गा जमिन बेच्दा पनि जुट्दैन यति पैसा । मैले एउटा एल्वम गरेँ यसपटक“शून्यता” । पैसा थिएन म सँग । एउटा संस्थाले सबै खर्च बेहोरिदीयो । नत्र “शून्यता” निस्कनै सक्थेन । पैसा नहुनेले सृजना भए पनि नचिनिने र पैसा हुनेले अरूका सृजना किनेर आफ्नो नाम लेखेर पनि स्रष्टा बन्ने तितो यर्थाथ सङ्गीत क्षेत्रमा देखेको छु ।
साहित्य र सङ्गीतमा लागेर मैले नाम सम्म कमाएछु । आज तपाँई मेरो घर खोज्दै आउनु भयो मेरो बारेमा जान्न । आर्थिक अवस्थाको कुरा गार्ने हो भने,मैले एउटा एल्वम निकाल्न पनि एउटा संस्थाको सहयोग लिनु प¥यो । अहिलेको अवस्थामा गीतकारलाई चाहिँ गाह्रो छ गीत लेखेर बाँच्न । नाम चलेका संगीतकारको कमाई राम्रै छ भन्ने सुन्छु । नयाँ गाएक गायिकाले पनि राम्रो कमाई गरेका छन् । विभिन्न महोत्सव,कन्सर्ट र विदेशका कार्यक्रमबाट ।
म नाचघरमा हुँदा गायक गुलाम अलि सँग भेट भएको थियो । उनी मलाई भन्थे–रसिक जी मैले आफ्नो जीवनमा २० वर्ष सङ्गीत सिकें । एक दिन गुरुले भन्नु भयो–अब तँ गाउन सक्ने भईस् जा गाउन सुरु गर् । मैले गाउन थालेँ । मेरो स्वर राम्रो छ पनि भनिन्छ । म अझै ४० वर्ष गाउन सक्छु । तर मैले गाउने समय ४÷५ वर्ष मात्र हुन्छ । किनकि सङ्गीत सुन्ने मान्छेले नयाँ नयाँ स्वर सुन्न चाहन्छन् । ती स्वरहरूको आगमन सँगै मेरो आवाज केही मेरा फ्यानहरुमा मात्र सीमित हुन्छ । यी ४÷५ वर्ष मैले नाम र प्रशंसकहरु मात्र कमाउँछु । मेरा ७ वटा छोरी छन् । तिनीहरूको विवाह गर्नु छ । मैले कमाएको नामले मात्र त नहोला ? पैसा कमाएको छैन । मैले सङ्गीतमा लागेर आत्म सन्तुष्टी मात्र पाएँ । मलाई उनको यो कुरा साह्रै चित्त बुझ्यो । हो त वास्तविकता यस्तै छ ।
सङ्गीत क्षेत्रमा आउने नयाँ पुस्तालाई मेरो सुझाव छ–सिकेर आउनु । हुनत नसिकी पनि यो क्षेत्रमा आउन सकिन्छ । तर सिकेर आउँदा सङ्गीतका धेरै सैधान्तीक कुरा थाहा हुन्छ । सङ्गीतको बारेमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । मैले सङ्गीत सिकीन त्यो अभाव खड्कन्छ मलाई । त्यो बेला लहलहीमा गीत गाईयो । “य है आज भेडा बाख्रा कता लाने” गीत हिट भयो । मैले सोचें–के सिक्नु प¥यो सङ्गीत,जस्तो गीत नि गाउन सकिहाल्छु । अहिले लाग्छ सिक्नुपर्ने रहेछ । अब यो उमेरमा सिक्छु भनेर नि कहाँ जाने ?
थुप्रै गीतहरू गाएँ, मेरो स्वर्गीय छोराले सङ्गीत गरेको गीत प्रिय छन् मेरो लागि । जसमध्य एउटा गीत छ, जुन गीत पहिला संगीतकार प्रवीण गुरुगंले सङ्गीत गरेका थिए । गीतको सङ्गीत पुरा नहुँदै उनको दुःखद निधन भयो । त्यसपछि मेरो छोराले त्यही गीतमा सङ्गीत गर्‍यो, छोराको पनि निधन भयो । मैले लेखेको शब्द थियो त्यो । संगीतकार प्रवीण गुरुगंले पोखरामा बस्ने आफ्नी आमाको सम्झनामा लेखिदिनु दाइ भनेर लेखेथें । सम्झँदा यस्तो लाग्छ, के थियो यो गीतमा र दुबैजना संगीतकार गुमायो यो गीतले ?
Rajesh Payal Rai Interview